Irak: Androm-pifidianana ao @ Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2010 20:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, Swahili, عربي, Português, বাংলা, English
Sary tsy hitan'ny hafa tany #iraq10 tao anaty biraom-pifidianana ao #Baghdad: www.mict-international.org/1a.jpg
Fifidianana ny any Iràka ka heniky ny vaovao farany momba izany ny tontolon'ny Twitter hatry ny maraina.
Raha te-hanaraka ny vaovao farany, dia araho manokana ny @iraqelections fa “solontena 30 manerana an'i Iràka no hitatitra ny zavamisy tsikaritra mandritra ny fifidianana isan'ora manomboka amin'ny folo ora maraina araka izay hitan'izy ireo ao an-toerana.”
Mandrisika ny mpamaky @iraqelections mba:
Araho ny fakam-baovaonay mandritra ny fifidianana eto Iràka amin'ny alahady, araho mivantana amin'ny Twitter eto. Mpanao gazety 40 no hisioka an-tserasera ny vaovao farany!
Mivaky toy izao ihany koa ny filazana hafa:
Mivantana ny anay – an-dalana ny fandikan-teny! Araho mivantana ny siokanay (Tweet moa no nadikako hoe sioka) momba ny fifidianana Irakiana jerena ato anatin'i Iràka. Midira amin'ny adihevitra #iraq10
Toy ny fahita amin'ny fifidianana manerana ny tany ihany ny vaovao farany avoakan'ny mpanara-maso, ankoatra ny maha-tranga amnokana an'i Iràka. Maro ny baomba nipoaka vao maraina ar be ihany koa araka ny tatitra ny gidragidra eo amin'ny ankolafy samihafa.
Ao amin'ny @iraqelections, nahafa-po tokoa ny asa vitan'ny mpitati-baovao tamin'ny alalan'ny filalaovana ny Twitter nampiasany ny fitaovan'ny valam-piarahamonina an-tserasera.
Tamin'ny vaovao farany no nitateran'i Laith:
Laith: Baghdad: Fianakaviana folo avy any amin'ny faritr'i AlKaradah no tsy nahazo nifidy satria tsy tafiditra tao anaty lisi-pifidianana ny anaran'izy ireo
Avy any Sulaimaniya i Jamal no manoratra:
#Sulaimaniya, Jamal: Tapitra ny fifidianana. Tsy navela hiditra hijery ny fanisam-bato ny mpanao gazety. #iraq10
Toeran-kafa ao amin'ny tonotlon'ny Twitter i @iawia1 no nanamarika:
Nanatontosa ny fifidianana tamin'ny fomba demaokratika indrindra eto amin'ny faritra i Iràka androany. Manantena fa hitohy izany ka ho ohatra ho an'i Proche Orient #iranelection #iraqelection #iraq
Tsara fijery ihany koa ilay Amerikana @jeffmeyerson:
Miara-mankalaza amin'ireo Irakiana mpandala fahafahana noho ny fizoran'izy ireo mankamin'ny demaokrasia. #iraq
Ary nanao famintinana ny fizotry ny androany i Miguel Marquez, solontenan'ny famoaham-baovao ABC:
Fifid:maty 38, maratra 73. Fipoahana manakaiky ny 40. Mbola nifidy ihany ny Irakiana. Tahaka ny ho be ny mpandray anjara ivelan'i BGD (Baghdad)